Cubot KingKong 7: smartphone maranitra vaovao. Endri-javatra sy vidiny | Androidsis
KingKong 7 no finday avo lenta vaovao an'ny Cubot $ 179,99
Miaraka amin'ny fanombohana ny Cubot MAX, ity mpanamboatra ity dia nanolotra ny KingKong7, finday avo lenta ho an'ireo mpampiasa mila smartphone tsy mahazaka fianjerana, tohina, asitrika anaty rano ... Ny zava-baovao ateraky ny Cubot KingKong 7 dia hita ao amin'ny fakantsary, fakan-tsary nihatsara be raha oharina amin'ny kinova taloha.
Mba hankalazana ny fandefasana ity fitaovana ity dia afaka mahazo azy amin'ny $ 179,99 fotsiny isika, rehefa ny vidiny mahazatra dia $ 299,99. Raha te hanararaotra ilay tolotra fampidirana ianao dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny manaraka rohy mankany Aliexpress hatramin'ny 23 Aogositra.
1 Fizarana sary
Ny Cubot KingKong7 vaovao dia amina ekipa fakan-tsary telo. ny ny sensor lehibe dia mahatratra 64 MP ary manana vavahady f: / 1,89. Ho fanampin'izany, mampiditra a Zoro 16 MP miaraka amin'ny zoro f / 2.4 ary zoro 124.8 degre. Ny sensor fahatelo izay omen'ity terminal ity dia a sensor sensor, sensor izay manana vahaolana 5 MP ary aperture an'ny f / 2.2.
Ny fakantsary eo aloha dia 32 MP, Mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hanafoanana ny tsy fahalavorariana amin'ny hoditra kely ankoatry ny fanolorana rafi-manokatra tarehy. Ny efijery natolotry ny Cubot KingKong 7 dia mahatratra 6,36 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 2300 × 1080.
Ao anatin'ny Cubot KingKong 7 no ahitantsika ny processeur Helio P60 avy amin'i MediaTek, processeur 8-core izay hahafahantsika mahazo tombony betsaka amin'ny fitaovantsika, ao anatin'izany ireo lalao mitaky be indrindra.
Ny processeur dia miaraka amin'ny RAM 8 GB sy fitehirizana anatiny 128 GB (azo velarina hatramin'ny 256 GB miaraka amin'ny karatra TF). Ny bateria, iray amin'ny tanjaky ity terminal ity, dia mahatratra ny 5.000 mAh, mihoatra ny ampy hampiasaina tsy an-kijanona mandritra ny andro.
Ny Cubot KingKong 7 dia tantanan'i Android 11 ary manana puce NFC miaraka amin'izany, amin'ny alàlan'ny Google Pay, azontsika atao ny mandoa ny fandoavam-bola isan'andro. Ity terminal ity dia manolotra antsika IP68 sy IP69K fanamarinana, hahafahantsika mampiasa azy amin'ny toe-javatra tsy misy atahorana ho tapaka na hijanona hiasa.
Araka ny nolazaiko tetsy ambony, ny Ny vidin'ny Cubot KingKong 7 dia $ 299,99. Na izany aza, mba hankalazana ny fandefasana ity terminal vaovao ity, manome antsika fihenam-bidy $ 120 ny mpanamboatra, noho izany ny vidiny farany amin'ity terminal ity Mijanona amin'ny $ 179,99 fotsiny. Ity tolotra ity dia azo alaina amin'ny 23 Aogositra.
Raha te hahafantatra ny rehetra ianao fepetra aroson'ny Cubot vaovao KingKong 7 Manasa anao aho hitsidika ny tranokalan'ity mpanamboatra ity amin'ny alàlan'ny rohy izay navelanay kely any aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » KingKong 7 no finday avo lenta vaovao an'ny Cubot $ 179,99